Ukuzibandakanya - Ekugcineni Wenze Isiphakamiso!
Ingabe ekugcineni umzuzu amantombazane alinde cishe yonke impilo? Le nsizwa yenza isipho - kunesizathu sokujabula, ikakhulukazi njengoba ukubandakanyeka kungacatshangwa ngokugcwele njengento ebalulekile futhi emangalisayo njengomshado wesikhathi esizayo.
Akekho ongacabanga ukuthi intombazane ingajabula kanjani ngosuku lapho ezwa ukuphakanyiswa kwesandla nenhliziyo evela othandekayo. Igcwele umuzwa wenjabulo engavamile, inkulu kangangokuthi ufuna ukumemeza ngayo yonke amandla akho. Kunemicimbi eminingi kakhulu ezayo - imizamo yomshado ngaphambi, ukulungiselela izimemo, ukukhetha ingubo yomshado. Kodwa okubaluleke kakhulu - ngaphambi kwakho konke ukuphila, okumangalisayo okukhazimulayo, okuyingqayizivele nokuthakazelisayo, ukuphila komndeni kuhambisana naleso sikhulu esihle, esilindeleke yilowo nalowo kusukela ebuntwaneni. Ukuzibandakanya kwenza umakoti osanda kuzalwa abe mnandi njengentombazane engakaze ibe khona. Ububanzi bemibono eyitholayo ayikwazi ukuchazwa ngamagama - lezi zindingo zidinga kuphela ukuzizwa, zidluliselwe enhliziyweni yakho futhi zahlakazeka ngokuphelele kuzo.
Usuku lokubandakanya kweholide
Kumele kuqashelwe ukuthi empilweni yanamuhla ekuzibandakanyeni akukho sidingo esivela kumbono wezomthetho kanye nomshado akubalulekile. Ngakolunye uhlangothi, kusukela kulolu suku lwabantu abasha abaqala ukubizwa ngokuthi umakoti nomkhwenyana, ngakho-ke akuzange kube yize lolo suku lwamaholide ukuthi izikhathi zangaphambilini zabekwa uphawu ngokukhethekile futhi zaphawulwa kancane kancane kunomshado ngokwawo. Ngosuku lokuzibandakanya, kwamukelwa ukuthi umkhwenyana uphinda isipho esenziwe kumlobokazi, phambi kwabazali bakhe futhi wabacela ngezandla zomfazi wesikhathi esizayo. Emva kwalokho, ingxenye enkulu yomcimbi iqala, lapho umakoti nomkhwenyana bamukela ukuhalalisela ngezihlobo, futhi umakoti uthola into ebaluleke kakhulu, uphawu lomumo wakhe omusha kanye nomthombo wokuziqhenya - indandatho yokuzibandakanya.
Lolu suku kufanele lukhunjulwe isikhathi eside
Yiqiniso, imikhosi yomshado ingadlula umkhosi wokuzibandakanya okuncane, ikakhulukazi ngokuzizwa nokuhlangenwe nakho, ubuhle nokujabula, ukuzijabulisa nokuziqhenya okungavamile. Kodwa ukuhlukumeza akufanele kubakhohlwe, ngoba liholide lokuqala lokujoyina abantu ababili abasha, kodwa hhayi umndeni owodwa, kodwa hhayi abantu abangaziwa.
Intombazane iyojabula ngokumangalisayo uma othandekayo wakhe engahambi ngesithukuthezi esishayisiwe somusho wokudala, kodwa uzovela nento ethile yangempela, engavamile futhi ejabulisayo. Ukuze wenze lokhu, akudingekile ukuthenga indandatho ebiza kakhulu noma ukudala imvelo engavamile - isisombululo esihle kakhulu sizobe sinikeza izandla nezinhliziyo evesini noma indandatho efihliwe esitokisini esincane esithandwayo, noma ngisho nangokwelashwa okuthandayo oyintandokazi.
Ukuzibandakanya okusemthethweni nokwehluleka kungaba yisikhathi esihle kakhulu sokwethulwa kwabazali bomfana abasha, uma bengakazi ngaphambili. Umkhosi wangempela womndeni yilokho okudingayo ukugubha injabulo kunazo zonke (ngaphambi komshado, yebo) usuku lokuphila kwentombazane. Ngempela, injabulo nenjabulo njalo bafuna ukwabelana, kodwa yini ekhona: Ngifuna umhlaba wonke ukwazi ngakho! Futhi ngubani ongasisekela kangcono futhi ahlanganyele ukuphunyuka, ukuchichima nokwehla kwenjabulo yomlobokazi, uma kungenjalo osondelene nabantu bakubo.
Ngemva kokuzibandakanya nabazali nokuzibandakanya okusemthethweni, isikhathi esisodwa emhlabeni kukhona uthando. Bangakwazi ukuchitha lolu suku njengoba bebona kufanelekile - behamba emigwaqeni, bekhala ngokuthanda kwabo kakhulu noma bahlanganyele injabulo yabo nabangani. Umkhwenyana nomkhwenyana bangahle bahlasele futhi badale ukungahloniphi okuhlukahlukene, ngoba lesi sikhathi - ukubandakanyeka - kungokwabo kuphela, abasencane, abagcwele impilo, othandweni, bemile emngceleni wezinto ezintsha, ezigcwele ngamathemba namaphupho wokuphila okuhlangene nokujabulisayo.
Izinsuku zemishado ngeminyaka
Inkulumo enhle yomshado. Inkulumo yokubonga yabasha
Isimbali somshado ngezandla zakhe. Incwadi yomdwebi onamakhono
Umshado we-Velvet: izici, imibono yokugubha nezipho
Indlela yokuhlobisa imoto yomshado: imibono yokuqala kanye nenhle
Umshado esontweni: uvikele uthando
Umbandamu ebusweni: izimbangela, ukwelashwa, zokuvimbela
Indlela ukupheka pepper ezazigxishwe inkukhu nengulube irayisi
Russian ejele - yindawo lapho kungcono ukuba uthole
Indlela thunga yezingane Indian imvunulo?
Lada Priora, ukubuyekezwa kanye izici
Le nyoni enkulu esidlule nezamanje
Polina gagarina unciphile ngu-40 kg? Izimfihlo inkanyezi pop
I ukuzilibazisa isikhungo "Swan Lake" (Kazan): incazelo kanye nokubuyekeza
Kudivayisi sokulinganisa umoya velocity. amathuluzi Meteorological
Amabhishi nudist: lapha "strawberry" Cha!
Izinwele udayi "Loreal Ekselans Iphalethi". Incazelo Nezibuyekezo